रोगी बन्दैछ शहरी जीवनः पेटमा विष, फोक्सोमा शिशा - सफलताका सुत्रहरु
Home/जीवनशैली/रोगी बन्दैछ शहरी जीवनः पेटमा विष, फोक्सोमा शिशा
रोगी बन्दैछ शहरी जीवनः पेटमा विष, फोक्सोमा शिशा
काठमाडौंको घाम पनि छैन स्वस्थ
२१ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०९:२१
काठमाडौं । केही समयअघि एउटा कहालीलाग्दो खबर आयो, काभ्रेको एउटा गाउँका पूरै किसानमा क्यान्सर भेटियो ।
किसानमा क्यान्सर देखिनुको कारण खोज्दै जाँदा डरलाग्दो तथ्यको खुलासा भयो । ती किसान तरकारी खेती गर्दा रहेछन् । तरकारीमा कीटनाशक औषधि छर्ने क्रममा उनीहरुले माक्स नलगाउने गरेको पाइयो । त्यसकै असरले उनीहरुलाई क्यान्सर भएको रहेछ ।
सावधान, विषादी छर्किएका त्यस्तै तरकारी हामी खाइरहेका छौं र हामी पनि क्यान्सरको जोखिममा छौं !
बजारका सागसब्जीमा निर्भर काठमाडौंलगायत मुख्य शहरका बासिन्दा दिनहुँ विष सेवन गरिरहेका छन् । हाम्रो भान्सामा आइपुग्ने अधिकांश सागसब्जीमा किटनाशक औषधीलगायत अनेक हानीकारक विषादी प्रयोग गरिएको हुन्छ ।
हलक्क बढेको लौका होस् या सर्लक्क परेको काँक्रो । तिनलाई छिट्टै ठूलो बनाउन र धेरै फलाउन अनेक रसायनको प्रयोग गरिएको हुन्छ । सागसब्जीलाई छिट्टै फलाउन, पकाउन, ठूलो बनाउन, किरा लाग्नबाट बचाउन अहिले जे जति कृत्रिम विधि अपनाइन्छ, ती सबै मानव स्वास्थ्यको प्रतिकुल छन् ।
हामी हरेक दिन भान्सामा तरकारीको भेषमा हरियो विष भित्र्याइरहेका छौं ।
काठमाडौंका बासिन्दाले खाने तरकारीको त कुनै भरै छैन । काठमाडौंमा काँठ र आसपासका जिल्लामा उत्पादित सागसब्जी नै खपत हुन्छ । ती तरकारीमा अत्यधिक विषादी प्रयोग हुने गरेको विभिन्न परीक्षणबाट पुष्टी भइसकेको छ ।
धादिङको कुरा बेग्लैछ । धादिङले काठमाडौंका लागि अधिक सागसब्जी निर्यात गर्छ । धादिङमा बिक्रीका लागि भनेर छुट्टै खेती गरिँदो रहेछ । त्यसरी उत्पादित सागसब्जी उनीहरु आफू पनि खाँदैनन् र आफ्ना गाईवस्तुलाई समेत दिँदैनन् । कुनै आफन्त वा चिनेजानेका ग्राहक सब्जी किन्न गएमा उनीहरु भन्ने गर्छन्, ‘यो खाने सब्जी होइन, काठमाडौं पठाउने हो ।’
यसबाट स्पष्ट हुन्छ, ‘खाने होइन, काठमाडौं पठाउने’ तरकारीमा अत्यधिक विषादी र घातक रसायन प्रयोग भइरहेको छ । अनि, हामी त्यही सब्जी खाइरहेका छौं । अर्थात्, मल्टि-भिटामिन, मिनरल्स र पौष्टिक पदार्थका लागि चिकित्सकले बारम्बार खान सल्लाह दिने हरिया सागसब्जी नै यसरी हरियो विषमा परिणत भइरहेका छन् ।
यो तरकारीको मात्र सवाल होइन, हाम्रो समग्र जीवनशैली विषाक्त बन्दै गएको छ । हामीले खाने खाना, बाँच्ने परिवेश, हाम्रो मनोदशा र जीवनशैली रोगी बन्दै गएको छ ।
हामी भन्छौं, स्वस्थ जीवनका लागि सन्तुलित खाना खानुपर्छ । त्यही खानालाई सन्तुलित भनिन्छ, जसमा शरीरलाई आवश्यक सबै पोषक तत्वको यथोचित मात्रा पाइन्छ । विडम्बना, हाम्रो भोजनमा पोषकतत्व नभई विषको मात्रा बढ्दै गएको छ ।
डरलाग्दो तथ्य के हो भने काठमाडौं खाल्डोमा अब हामीलाई सास फेर्नका लागि शुद्ध र पर्याप्त अक्सिजनको अभाव हुन थालेको छ । काठमाडौंको वायुमण्डलमा पुग्दो अक्सिजन नै छैन ।
नागढुंगाबाट कलंकीतिर लाग्नासाथ हामीलाई उकुसमुकुस हुन थाल्छ । हावामा धुवाँ, धुलो र अनेक घातक रसायन मिसिएकाले हामीले पलपल फेर्ने सास पनि विषाक्त बन्दै गएको छ । जनघनत्व जुन अनुपातमा बढ्दो छ, त्यसअनुरुप काठमाडौंमा रुखपात वा अक्सिजनका स्रोत छैनन् । त्यसमाथि मानव निर्मित फोहोर मैला, धूवाँ, धूलो आदिले वायुमण्डललाई दुषित बनाएको छ ।
हालैको एक अध्ययनबाट काठमाडौंको वायुमण्डलमा लिडको मात्रा अधिक रहेको देखिएको छ । अर्थात्, शिशाको मात्रा धेरै छ । कतिपय घातक कणहरु यति सुक्षम हुन्छन्, जुन सोझै रगतमा मिसिन्छन् । यसबाट दम मात्र होइन, फोक्सोको क्यान्सरको सम्भावना एकदमै बढेको छ ।
भिटामिन डीको कमि
केही समयअघि अनलाइनखबरकै एक आलेखमा कुलमान घिसिङले आफूमा भिटामिन डीको कमि भएको बताएका थिए ।
वास्तवमा उनी मात्र होइन, अधिकांश काठमाडौंवासीलाई भिटामिन डीको कमि छ । यद्यपि, यसबारे सबैले खास चासो देखाएको पाइँदैन । भिटामिन डी हामी खानेकुरा र घामको किरणबाट प्राप्त गर्छौं । तर, न हामीले खाने खानेकुरा स्वस्थ छ, न त घाम नै । बिहानको घाम ताप्नुपर्छ, भिटामिन डीका लागि । यद्यपि, हामीसँग घाम ताप्ने समय नै छैन ।
शहरी जिन्दगी व्यस्त छ । कामकाजी मानिस हुन् या केटाकेटी, भान्सामा अडिलो चिज बनाएर खाने जाँगर र फुर्सदसमेत हामीसँग हुँदैन । भोक लाग्यो ? लौ बजारबाट चाउचाउ मगाएर सके काँचै, नसके दुई मिनटमा उमालेर खाइहाल्यो । केही खाउँखाउँ लाग्यो, लेज या कुरकुरे पेटमा हुल्यो । हुँदाहुँदा डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट रेडिमेड खाना ल्यायो र ओभनमा तताएर खायो ।
रेस्टुराँमा डिप-फ्रिजमा लामो समयसम्म राखिएका चिजहरु खानमै हामी शान ठान्छौं । अनि, घरमा फापर, कोदो या गहुँको रोटी, मकै-भटमास बनाएर खान अल्छि गर्छौं । बजारमा पाइने चिल्ला प्याकेटभित्रका चिजहरुको गुणस्तर जेसुकै होस्, तिनमा सुक्ष्म पोषकतत्व होस् कि नहोस्, मानिसहरु बजारकै खानामा भर पर्छन् ।
पि्रजर्भेटिभ्स हालिएका ती प्याकेटका खानेकुराकै कारण पनि हाम्रो आन्द्रा विस्तारै विषाक्त बन्दै गएको छ ।
अनलाईन खवर डटकमबाट साभार
टाउको दुखाईको अवस्थाले संकेत गर्छ स्वास्थ्य समस्या
नवजात शिशुलाई भेट्नुअघि जान्नैपर्ने ६ कुरा
४ मंसिर २०७४, सोमबार ०९:०४
२७ कार्तिक २०७५, मंगलवार ०७:३१
६ असार २०७५, बुधबार ०८:१८
राशिफल / २०७४ आश्विन २५ गते बुधबार
२४ आश्विन २०७४, मंगलवार २१:४६
आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ आषाढ १५ गते शुक्रबार
१४ असार २०७५, बिहीबार २३:१५
८ असार २०७५, शुक्रबार २१:४५
२१ कार्तिक २०७५, बुधबार २३:०५
आकाङ्क्षा सम्वन्धी अजर अमर भनाईहरु – भाग १
१२ जेष्ठ २०७५, शनिबार ०७:३४
नम्रता सम्वन्धी अजर अमर सुक्तिहरु
३० कार्तिक २०७५, शुक्रबार ०६:३५
ग्यास्टिक तथा अल्सरसाथै यी समस्याहरूकाे अचुक औषधी डल्ले खुर्सानी
४ आश्विन २०७४, बुधबार १९:५०